Chipangamazano wezvematongerwo enyika anofunga kuvaka dzimba dzedzidzo! : Martin Vrijland
Chipangamazano wezvematongerwo enyika anofunga kuvaka dzimba dzedzidzo!
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa10 December 2019	• 13 Comments
CTP Veldzicht, kwawanikwa: youtube.nl
Ndanga ndichinyora nezvazvo kwemakore uye ikozvino iko kuri pachena pachena kuti vezvematongerwo enyika vari kudaidzira kudzidzira misasa. MuNetherlands taizozvidaidza kuti 'kubatanidzwa mubatanidzwa', senge iri mudunhu reChinese reUyur, asi kuU.S. iyo George Orwell nhau hadzitaurwe kana.
Isu maDutch takarongedza zvese zvine hungwaru nemazwi sekuti 'hanya'. KuU.S., chipangamazano wezvematongerwo enyika uye wezvemitemo anonzi Rick Wilson akaisa tweet nezuro umo anongoreva nezwi rekuti "dzidzo yekudzidzira misasa." Tora tariso uye terera kune yako yekutanga maitiro. Isu tinobheja kuti kana iwe uri wekubatira, iwe unofunga chaizvo kuti izvi zvakanaka?
Anti-vaxxers idambudziko uye nharo yakasimba yekudzidziswa-makambi kudzidzisa, mwaka chaiwo wepfuma yavo, uye kuisa vana vavo kuchengetedzwa. https://t.co/9vHPeEl9hf
- Rick Wilson (@TheRickWilson) December 6 2019
Anti-vaxxers idambudziko uye nharo ine simba yekudzidzira-kudzidzisa misasa, kubatwa nekukurumidza kwezvinhu zvavo uye kuchengetwa kwevana vavo.
Nei uchifunga kuti zvakanaka? Nekuti wakaudzwa nevatori venhau ne "nyanzvi" dzayo kuti kusabvisa huwandu hwevanhu kune njodzi. Iwe wakaudzwawo nevatori venhau uye "nyanzvi" dzaro kuti idzi dzidziso dzokurangana dzose hadzina kururama. Dai vanhu vashoma vashoma vashanyira iyi webhusaiti kakawanda uye vaipfuura kusarura, vangangodaro vakawana kuti kupikiswa kwagara kuchisanganisa nemaune chokwadi nemaoko, kuti vezvenhau vashandise manyepo anozvivakira kuti abvise pfungwa dzese dzekupesana nekudzivirira. in wave Ndicho chinangwa chekudzora kushorwa uye ndatsanangura izvi kakawanda pano pane webhusaiti.
Nekudaro, chii chinokosha ikozvino ndechekuti maonero akajairwa akagadzirwa pakati pevanhu, iyo inotaura kuti kana chikamu chidiki chehuwandu chisinga perekedze, boka iri (risingafarirwe) rinotyisidzira vamwe vese. Kana vanhu vasina kudzivirirwa vakarwara, vanogona kutapurira vanhu vaccin. Iwe unobva uine kujekesa kwepfungwa here kuti uzive kuti vaccin inogona kunge isingashandewo? Kana vanhu vakadzivirirwa kubva kuhutachiona uye ndokurwara, chirongwa chekudzivirira hachiiti hachiite nemazvo.
Mumakore achangopfuura ndakayambira kazhinji kuti tiri muhutongi hwekutonga uye kuti mitemo yese yakagadzirirwa kuunganidza nekubvisa chero munhu ane pfungwa dzakatsauka kubva kune iyo yenyika. Neichi American concrete chikumbiro chedzidzo-makasa, kugamuchirwa pakati pevanhu kuyerwa. Huwandu hweanodiwa pasi pe tweet unoratidza kuti vangani vanhu vakatobvuma. Mukuita, zvakadaro, mutemo wese watova munzvimbo muNetherlands kubvisa vanopesana kubva mudzimba dzavo. Iyo Inomanikidzwa Mental Health Act (WvGGZ) inotora mhedzisiro mu2020. Mutemo uyu unoita kuti zvikwanisike izvo zvakamiswa pasi pekanzuru yapfuura, iyo iri kusungisa vanhu zvekutarisa uye kupa mishonga pasina kupindira kwemutongi kana chiremba wepfungwa (ona uku kutsanangurwa kwakadzama).
Iwe unonzwisisa zvinoreva izvo? Pasina iwe kuzviziva, iwo maDutch kudzidzisa-makambi atoonekwa. Isu hatina kungozviita pachena uye hatina kuvadaidza "kamberi redzidzo." Isu tavadaidza kuti Mental Health Care (GGZ) institution.
Iyo Haye yakasundira kuburikidza nemitemo yese inodiwa semhedzisiro yekuda kupindira mushure mekushungurudzwa kukuru uye mhondi. Ingotinya pane yebhuruu yekubatanidza iyo tsanangudzo yakawandisa uye zvibvunze kana aya mabasa epfungwa (PsyOps) akakwanisa kusundira kuburikidza nemutemo wese uyo (pasina vanhu vachifunga kuti izvi zvingave zvakaenda kure kure) . Kana iwe ukaunza dambudziko rekukanganisa kukuru munharaunda mune vezvenhau, unoita kuti vanhu vatsamwe, vatye uye vadzore pfungwa. Wobva waunza ivo mukugamuchirwa maitiro emitemo iwo iwo asinga zive kuti munguva pfupi inotevera zvingavakanganisa ivo pachavo.
Kune alibis akati wandei ekudzidzira-dzidzo muDutch (GGZ) kudzidzisa makambi:
anoramba mamiriro ekunze
kubvumirana nezvikoro transgender zvidzidzo
anopandukira anopesana hunhu maitiro (OOG)
Iwo anopandukira anopikisa hunhu maitiro (OOG) anogona zvirokwazvo kukweverwa zvakanyanya. Iwe unopandukira rinhiko? Unogona kuzvifungira. Rudzi rwunopedza iwo kuoneswa ndeyekupedzisira.
Ngatitarisei kune tsanangudzo ye â € ˜psychoticâ € ™. Izvi zvinodaro nekuti zvese zvakafukidzwa. Nezita rekuti â € ˜psychoticâ € ™ zvimwe ungafunga nezvevanhu vanopenga nekumira pavharanda vachipururudza vachizvikanda pasi. Kwete, iwe watove psychotic kana iwe uine "zvekunyepedzera". Mubvunzo unotevera kuti chii chinonzi tsanangudzo.
Iyo Baptordokter.nl webhusaiti chikamu chewebsite inoisa vanhu kune "iyo yakakodzera hutano hwehutano" (solvo.nl). Saka icho chikirabhu chakabatana neGGZ. Zvinoenderana na iyo webhusaiti Tsananguro yedzekedzero iri seinotevera:
Zvinoenderana nekutsanangurwa kwepfungwa (ona pano) mumwe munhu ane ruzivo rwekunyepedzera. Izvo ndezve izvo izvo zvinopesana nezvazviri. Mubvunzo mukuru ndouyu: Ndiani anosarudza 'izvo chaizvo'.
Zvakanaka: kana iyo dunhu ikaona kuti 'chokwadi' ndechekuti vacccin yakanakira iwe, kuti mamiriro ekunze anodiwa nekuti nyika ichaita zvimwe kuora mumakore 12 (nekuda kwe CO2 uye kudziya kwepasirese somugumisiro), kuti uchine wako mukadzi Kana iwe uchigona kusarudza uye usiri mukomana kana musikana nekuzvarwa, ipapo unenge uine kusafunga kana "kutenda kwako kuchipesana nezvinoitika" Kana iwe uchitenda kuti 911 raive basa remukati, saka iyo nyika inogona kuona kuti izvi zvasiyana neyechokwadi uye ipapo une fungidziro.
Tsanangudzo dzatova ipapo, mutemo watovepo, iyo psycholances tagadzirira. The Netherlands ndiyo yekutanga nyika muEurope kukwanisa kuzadza yaro-dzidzo misasa. The Ruinerwold PsyOp akabvisa chikumbaridzo chekupedzisira, chiri icho chekuda kwechinhu chedare redzimhosva; inonzi zvakare yekutsvaga waranti.
Zviri muchinyorwa ichi kuti ndinokurudzira kuti uverenge bhuku "Izvo chaizvo sezvatinozviona."
Source chinyorwa listings: lmusipost.nl, ypsilon.org
Kutanga kwatanga here? Psycholance yakange yatopihwa iwo girini yakajeka mu2018 yakavakirwa pane Els Borst / Bart van U. kesi
Mune mamiriro emapurisa, iwe unoda kurambidzwa kwekutapa mapurisa uye "vabatsiri" vanopa
Nhanho yekutanga inonyora, iyo yechipiri nhanho kusasanganiswa: bhatani rekudzivirira
Ziva iyo nhoroondo kuti unzwisise iyo UN Age 2030
Dzvinyiriro inoitirwa pavana yakakura!
Tags: kubvuma, Anti-vaxxers, Featured, GGZ, re-education camp, misasa yekudzokorora zvakare, EYE, anopandukira anopesana maitiro ekusagadzikana, psycholance, psychosis, psychotic, Tweet, kunyengera, kunyengera, kunyengana, kunyengera, WvGGZ
10 December 2019 pa 05: 37
RIVM yaita kuti webhusaiti ive yakanaka kwazvo nenyaya dzakanaka uye mifananidzo nevana vanonyemwerera. Asi kana iwe ukatarisa mberi iwe unowana chaizvo mapepa chaiwo. Nehurombo, vanhu vakasuwa zvakanyanya kutora dambudziko kuti vaverenge bhuku kana pepa rakashama.
Iko hakuna humbowo hunoratidzira hwekuti vaccine vanogona kutapurira hutachiona, asi kana uine pepa remupepa, zvinogoneka.
Zviri pachena zvakare kuti vana kubva ku9 kusvika kumwedzi we12 vanogona kunge vasingapindure pakurapwa.
Tora zvakare dambudziko rekurasa zvimiro, kwete zvinhu zvakanaka kuti upinde muropa rako. Izvi zvinonyanya kuitika kune vacheche vasati vava nehurongwa hwakasiyana hweropa mumitsipa yavo.
Iwe unogona kunyatso taura nyaya yakajekeswa zvakajeka mudare, o kumirira ichi ndicho chikonzero icho mutemo wakagadziridzwa. Vanogona kukuparadzanisa iwe kuti iwe usakwanisa kutaurira iyo yakavakirwa nyaya?
10 December 2019 pa 11: 50
Ndinoona zvakakosha kuti iwe uve nehutongi
inopa kubatsira kwekusahadzika. Ngativerengei nenzira iyoyo. Tichifunga kuti isu tinoziva anotonga huwandu hwevanhu uye ivo zvakajeka-vanomiririrwa mudare redzimhosva.
10 December 2019 pa 19: 16
Vatongi havavimbe asi kana iwe uine nyaya yakavakirwa zvakanaka uye inobuda ipapo unogona kuhwina kuburikidza nekumanikidza veruzhinji.
Willem S akanyora kuti:
10 December 2019 pa 11: 22
Iyo misasa yatovepo, ini, vanorwara America, iwo maFema misasa.
Isu tine imwe muZaanstad.
10 December 2019 pa 12: 43
Kwete "kupokana" pasina "kupokana"!
Voltaire * Ini ndinonyangadza zvamunotaura, asi ini ndichadzivirira kodzero yenyu yekuzvitaura neupenyu hwangu.
Yekutanga: Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, corn me me battrai jusqu'au bout shed que vous puissiez le dire.
10 December 2019 pa 13: 13
Kodzero iyoyo haipo saka muNetherlands. Zvinotaurwa nemutemo iwo chiratidzo checherechedzo uye kufarirwa kana uchichiwana. Mafungiro ako haangave akasiyana kusiyana nekaitiro kemakoo, mukufarira kwevakomana.
10 December 2019 pa 13: 04
Iyo inonaka yekumeso svutugadzike yemusanganiswa nehutachiona husina kusimba mupenyu kana maseru ehutachiona akafa. Uye chii chimwezve chirimo. Izvo hazvigone kuve nehutano kana kuti zvinokwanisa? Asi ini ndiri kuzotora imwe nekuti nekuti handisiyako. Ipapo ndinobva ndasurukirwa ndobva ndamboti pamwe ndichatanga kuzvishingisa ivo pachavo uye ivo ndokuzondipa iwo iwo mushonga wekuridza anyway kana vandinyurura mudambudziko riya. Ehe, asi asi shandira pamwe uye ugamuchire kurapwa kwako nekuti kwakanyanya kukosha! Iko hakuna midziyo yekuyera kuti uone kana iwe uine schizophrenia, kutya, kushungurudzika kana utsinye. Asi zvakadaro kurapa kwepfungwa kunobva pane zvinyorwa zvisina chokwadi kupfuura chikoro. Ivo vanoziva chaizvo izvo zvaunazvo uye iwe unofanirwa kugamuchira kuti ivo ndiye akakodzera nyanzvi kwete iwe. Chikamu
Mumakore achangopfuura, aya majeri akavhara, senge dome uye bijlmerbajes. Vakanga vava kuita zvekufungidzira, vakakuudza, asi izvo zvakagadziriswa neAmerican Security Security Jeri, izvo zvaive zvakanyanya kudiwa. Madurodam ine yakanaka chaizvo dhizaini zvino, chokwadika, haigone kusara kumashure. Nekuti munyika muno isu takanyanya kunaka pane zvese tichienzanisa nevamwe vanhu vese. Varanda vane hunyanzvi hwepamberi vanogona kuwanikwa pano, nekuti hongu zvakanyanya pane zvese.
10 December 2019 pa 16: 58
Hazhinji kushungurudza, mutemo unoshamisa, muNetherlands uye ramangwana rakajeka rinotemerwa pane marongero anogona kana angangodaro asina kubatanidzwa mumutemo. Kana isu tichida kuchinja iyo bumbiro, isu tinofanirwa kubvunza avo vanobata nzvimbo dzakakosha muNetherlands uye saka tarisa mutemo, ivo vakuru mune script, kusiya izvo zvakakosha nzvimbo kana kuigovana nevanhuwo zvavo. Ivo havazoiti izvo nekuti vanofarira masimba, mari, ropafadzo uye kudiwa nekuda kwenzvimbo dzakakosha idzo vanhuwo zvavo vasina. Zvichida varimi vanogona vachiri nechokwadi cheKisimusi inodziya pamwe nekuratidzira kwavo kuri kuuya munaDecember, chokwadi munhu wese anochengeta mhosva kumutemo. Uye kuti vakomana vacho vanoda nokuzvidira kusiya kwavo kunokosha nzvimbo. Zvimwe chimwe chinhu chiri kupedzisira chaitika munyika muno? Ndichiri kuzviona. Chero zvazvingaitika, varimi, vagari uye vanhu vekunze vanofunga kuti uchave unorapwa maminetsi ese. Asi iwe unozviziva izvo, ndizvo?
11 December 2019 pa 10: 49
Kune zvakare vanhu muNetherlands vanofunga kuti misasa yakadaro ipfungwa yakanaka.
Mufananidzo wepikicha wakaratidza maitiro aya kubva kune vaviri ngochani vane mwanasikana.
Ini ndanyora kakawanda kuti chinangwa cheHondo yechipiri yePasi rose yaive yekudzvanyirira mamwe mapoka uye nekuvapa inviolability chimiro. Mamwe emapoka evagari vemo ava kudzvinyirira vanhu mumisasa mune yaimbova Palestine uye rimwe boka richava zvakare iro rinodzvinyirira iro rinobvumirana nemisasa yevasungwa ("kudzidzisa-misasa"). Ini ndiri kutaura nezve LGBTI nharaunda, izvo zvichakurumidza kuita kana vanhu vasingabvumirani nekuparadzirwa kwevakadzi vatumirwe kumusasa wakadai. (Uye inova 'musasa' ndeyechokwadi yakatsiviwa ne 'nzvimbo yekutarisira')
12 December 2019 pa 21: 07
Huwandu hwakanaka hunowana zvese zvakanaka.
Ivo vese vakabatikana nekushongedza kweKisimusi. Iparadhiso yakadii inofanira kunge iri pano kana iwe uchizviita.
Zvisinei hazvo kutaridzika kuri kunyepedzera kuedza kwekutsiva yakaipa kunze kwenyika nekushongedza.
Ivo vagari vakanaka vanozvibata savaranda vane moyo mutserendende
izvo zvinongoshanda nekudzikisira zvinhu zvisina kunaka. Vangani vane hunhu hunowanzo vagarwa zvakanaka vagari vemo kutarisana neicho chaicho.
Zvichida ndinofanira kuturika kumwe kushongedza. Emperor anogona kunge asina kupfeka zvachose. Kwete ini handibudirire.
Hapana zvekushongedza gore rino.
ongorora akanyora kuti:
13 December 2019 pa 09: 33
Chisarudzo chekuchenjera mune mamiriro ezvirongwa zvekusimudzira. 😉
16 January 2020 pa 12: 52
Panotova necampion yedzidzo muNL inorwara, iri Zaanstad.
Iyo Demi Fema musasa ipapo ichave yakawanda.
16 January 2020 pa 13: 19
Isu tinofunga maererano nematirongo, asi kune huwandu hukuru hwemakiriniki eGGZ achashanda semisasa yekudzidziswa zvakare uye mutemo wekubvumidzwa weGGZ (wakavamba munaNdira 1, 2020) unoita kuti zvive nyore kwazvo kuzadza iwo makamuri.
« Dzvinyiriro inoitirwa pavana yakakura!
Chinangwa cheChishanu: sei vana muzvikoro vanoremerwa neBDBTI nhema »
Total Visits: 16.117.501
Canada: Chinese Dr. Xiangguo Qiu naWuhan hutachiona hwehondo yekurapa kuti iite China kuvimba neChina mhinduro
SandinG op Canada: Chinese Dr. Xiangguo Qiu naWuhan hutachiona hwehondo yekurapa kuti iite China kuvimba neChina mhinduro
Martin Vrijland op Canada: Chinese Dr. Xiangguo Qiu naWuhan hutachiona hwehondo yekurapa kuti iite China kuvimba neChina mhinduro
ongorora op Iyo coronavirus kubva kuChina inopa iyo yakakwana alibi yekubvumirana kupora kwese
SalmonInClick op Canada: Chinese Dr. Xiangguo Qiu naWuhan hutachiona hwehondo yekurapa kuti iite China kuvimba neChina mhinduro